Aiza no hividianana finday sinoa, tranokala natokisana - Septambra 2021 | Androidsis
Aiza no hividianana finday sinoa
Jose Alfocea | | Android Android, Finday
Ny habe sy ny isan-karazany amin'ny finday avo lenta ananantsika amin'izao fotoana izao dia be dia be, ka rehefa maniry na mila manova ny terminal isika, dia mahazatra ny mahazo korontana satria samy hafa be ny vidiny, na izany aza, ny tombony azo ny kalitaon'ny avo kokoa sy ambany dia miha mifangaro, ary ilay tsipika manasaraka ny ambany, salantsalany, ambony na fari-bola premium, dia manjavozavo hatrany.
Noho io antony io, anio ao amin'ny Androidsis dia tsy hanome anao torohevitra momba ny fomba hividianana telefaona sinoa tsara indrindra izahay na ny finday avo lenta indrindra, na ny mora indrindra na ireo izay manome lanja bebe kokoa amin'ny vola. Androany tsy maninona ny karazan-telefaona ilainao, na ilay tianao na ilay hividiananao farany, satria anio izao no holazainay aminao dia aiza no hividianana ny finday sinoa tsara indrindra Avy amin'ny tsena.
1 Angano manala
2 Mividy any Espana sa mividy any Shina?
3 Fivarotana any Espana miaraka amin'ny antoka eropeana
4 Mividiana mivantana avy any Shina
5 Vidio mivantana ireo finday sinoa tsara indrindra amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra azy
Rehefa miresaka momba ny finday sinoa isika dia maro ny olona mbola mieritreritra fotsiny ny kopia, sandoka ary fitaovana manana kalitao mampiahiahy, na izany aza, nivoatra be io tsena io ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy izany intsony no izy. Andao hieritreritra fotoana fohy momba ny marika toa Meizu, Huawei, Vivo, Oppo na Xiaomi. Firma avokoa izy ireo, na dia mbola tsy misy any amin'ny firenena maro aza deraina sy tadiavin'ny mpanjifa miha mitombo. Tsotra ny antony: nianatra nanamboatra fitaovana avo lenta izy ireo fa ambonin'izany rehetra izany. afaka nanambatra ny fahombiazana tsara amin'ny vidiny misy tombony bebe kokoa noho ireo natolotry ny haino aman-jery hafa maro hafa toa ny Samsung na Apple.
Etsy ankilany, raharaham-barotra sarotra ny miresaka "kopia". Mazava fa tamin'ny lasa, ary hatramin'izao, marika maro no voampanga ho naka tahaka ny hafa (iray amin'ireo tranga farany malaza sy malaza indrindra dia ny OnePlus 5, izay lazain'izy ireo fa manana "fitoviana mitombina" amin'ny iPhone 7 Plus avy amin'ny Apple) na izany aza, kopia ve ny endrika efa-joro? Adika ve ny fandaminana ny sary masina? Adika ve ny sisin'ny boribory? Eny, avelako io.
Mividy any Espana sa mividy any Shina?
Rehefa manapa-kevitra hoe aiza no hividianana finday sinoa tsara indrindra, ny fanontaniana lehibe dia ny hoe hatao amin'ny fivarotana any Espana na amin'ny magazay an-tserasera any Shina. Amin'ny ankapobeny, ny fahasamihafana misy eo amin'ny safidy iray na hafa dia misy fiantraikany amin'ny refin'ny vidiny sy ny antoka, kanefa, tsy izy ireo ihany no lafin-javatra tokony hodinihintsika:
Ao amin'ny fivarotana sinoa an-tserasera no hahitantsika ny vidiny ambany Avy amin'ny tsena.
Etsy ankilany, rehefa mividy any amin'ny magazay sinoa isika dia atahorana ho voatazona amin'ny fadin-tseranana ny vokatray, izay midika fandoavam-bola mety ho 40 Euros.
Rehefa mividy any Espana na amin'ny firenena eropeana rehetra isika dia voasaron'ny lalànan'ny zon'ny mpanjifa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hanana fe-potoana farafahakeliny 14 andro hamerenantsika maimaimpoana ny vokatra ary antoka roa taona farafahakeliny ho an'ireo olana nateraky ny lesoka tamin'ny famokarana.
Ary mifandray mivantana amin'ilay voalaza etsy ambony ny serivisy aorian'ny varotra. Azonao an-tsaina ve ny hifandraisanao amin'ny mpivarotra sinoa iray kilometatra an'arivony kilometatra miala ao anatin'ny valo volana?
Rehefa mividy any Shina isika, mazàna dia tsy maintsy miandry eo anelanelan'ny telopolo ka hatramin'ny enimpolo andro akory vao hahazo ny vokatra ao an-trano; Raha mividy azy any Espana isika dia afaka manana ilay finday vaovao ny andro manaraka.
Raha vantany vao manome lanja ireo fahasamihafana ireo ianao dia ianao irery ihany no mandray ny fanapaha-kevitra fa na izany na tsy izany dia hasehonay anao ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra ahafahanao mividy telefaona sinoa tsara indrindra, na any Espana na any ivelany.
Fivarotana any Espana miaraka amin'ny antoka eropeana
Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, ny iray amin'ireo tombony lehibe hividianana finday sinoa tsara indrindra any amin'ny magazay an-tserasera Espaniôla (na misy amin'ny firenena rehetra ao anatin'ny rafitry ny Vondron Eropeana), dia ny hananantsika fiantohana mandritra ny roa taona farafahakeliny, araka ny lalàna napetraky ny mpanjifa. Ho fanampin'izany, azontsika atao ny manao ny fiverenan'ny vokatra tsy andoavam-bola ary tsy mila manome fanazavana ao anatin'ny efatra ambin'ny folo andro voalohany amin'ny fividianana (na ny fotoana maharitra napetraky ny mpivarotra).
Ho takalony, ny vidiny dia matetika tsy ambany Ny fomba fividianana amin'ny tranokala sinoa, na izany aza, mieritreritra izahay fa efa manomboka amin'ny vidin'ny mpanamboatra tena mahasoa, hanana izany antoka izany izahay, ary koa, handray ny findainay vaovao aloha be isika.
Ny sasany amin'ireo magazay lehibe any Espana izay ahafahanao mividy finday sinoa tsara indrindra dia ireto manaraka ireto:
Amazon. Tsy isalasalana fa, ny goavam-be amin'ny varotra amin'ny Internet dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hividianana ny finday vaovao. Ny vidin'izy ireo matetika no mahasoa indrindra eny an-tsena (saika matetika), hanana ny antoka Amazon ianao ary koa, raha mpampiasa Prime ianao dia afaka mahazo an-trano maimaimpoana izany ny ampitso. Any Amazon ianao dia afaka mahita ny karazany lehibe indrindra amin'ny finday sinoa tsara indrindra, ary izany no antony fivarotana izay matetika no anolorantsika anao matetika.
Fnac iray amin'ireo fivarotana hafa izay afaka mahazo ny sasany amin'ireo finday sinoa tsara indrindra. Toy ny Amazon, raha mpikambana ao amin'ity rojo frantsay ity ianao dia hanana fandefasana maimaim-poana. Mifanohitra amin'izany no izy, ny vidiny dia matetika tsy ny safidy tsara indrindra eny an-tsena, ary tsy manome finday maro karazana toa an'i Amazon. Iray amin'ireo vaovaony farany farany ny hoe lasa mpaninjara ofisialy Xiaomi izy, koa raha mila finday amin'ity marika ity ianao dia toerana tsara hijerena azy.
Media Market Izy io dia iray amin'ireo mpivarotra elektronika, solosaina ary telefaona lehibe indrindra. Ary koa eto ho hitanao ny finday sinoa isan-karazany amin'ny vidiny lafo.
PC Components. Na eo aza ny anarany, mpivarotra espaniola ity miorina ao Alhama (Murcia), iray amin'ireo fivarotana an-tserasera malaza eto amin'ny firenentsika izy io, ary manolotra finday sinoa vitsivitsy izay hanananao any an-trano ihany ny ampitso.
Power Planet Online. Ary mbola tsy miala ao Murcia izahay satria any amin'ny tanànan'ny Alhama sy Totana dia misy iray amin'ireo mpivarotra finday sinoa tiako indrindra. Manompo an'i Espana rehetra izy ireo, manana vidiny tena mahasoa izy ireo, fandefasana entana, mahafinaritra ny serivisy aorian'izy ireo ary manolotra iray amin'ireo karazana lehibe indrindra amin'ny finday sinoa sy karazana kojakoja rehetra izy ireo. Miresaka zavatra niainako aho. Afaka miditra mivantana ianao eto.
Fiainana Geek Izy io dia miasa avy any Espana ka hanana antoka eo an-toerana sy serivisy aorian'ny varotra ianao. Ho fanampin'izay, ao amin'ny fivarotana an-tserasera Manana safidy hisafidy ny fandefasana entana any Shina ianao (mora kokoa) na avy any Espana ao anatin'ny 48 ora; Azonao atao aza ny mitahiry vokatra halefa any aminao raha vantany vao misy izany.
Mividiana mivantana avy any Shina
Ny fividianana finday sinoa tsara indrindra avy amin'ny tranokala sinoa dia manana tombony lehibe manazava ny fahombiazany: amin'ny ankamaroan'ny tranga, manolotra ny vidiny tsara indrindra eny an-tsena. Na izany aza, ny fatiantoka izay noresahintsika tany am-piandohana dia manan-danja tokoa ka tokony ho fantatsika tsara izany. Noho izany dia manasa anao aho hampakatra andalana vitsivitsy indray ary avereno jerena tsara.
Voalaza fa, ny sasany amin'ireo magazay sinoa malaza indrindra ahafahanao mividy mobiles sinoa tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra dia:
Aliexpress Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe "the Amazon Amazon". Amin'ity online store ho hitanao saika ny finday rehetra (ary saika ny zava-drehetra azonao eritreretina) amin'ny vidiny mahavariana. Ankoatr'izay, raha jerena ny halehiben'izy ireo, dia niezaka mafy izy ireo mba hanome fiarovana ny mpividy, na dia marina aza fa maro ireo mpampiasa no tsy mizara an'io hevitra io. Saingy tsy tiako ny hieritreretanareo fa manandrana manala baraka an'ireto magazay ireto aho: amin'ny tena manokana, hatramin'ny intelo tsy mbola nahazo ny vokatra novidiako (ao anatin'izany ny router Xiaomi) ary tamin'ny fotoana telo dia naverina ny volako tsy mila manome fanazavana fanampiny.
Jiro ao anaty boaty Izy io dia iray amin'ireo fivarotana sinoa malaza indrindra amin'ny Internet; sambo saika amin'ny firenena rehetra, ao anatin'izany i Espana, ary ny katalaoganao tena malalaka io.
Deal Xtreme dia magazay an-tserasera sinoa mitovitovy amin'ilay teo aloha, miaraka amin'ny finday sy kojakoja isan-karazany amin'ny vidiny tena manintona.
Mpividy tsirairay, safidy hafa ho an'ny mividiana finday vaovao amin'ny Internet ny vidiny tsara indrindra.
Igogo Izany dia pejy amin'ny espaniola ary miaraka amina fanohanana aorinan'ny varotra tsara izay mizara vokatra ho an'ny firenena marobe, anisan'izany i Espana.
Bang tsara, iray fivarotana izay mazàna mandefa tolotra tsy mampino, izay efa nambaranay teto. Tsy isalasalana fa, io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hividianana finday sinoa tsara indrindra raha manapa-kevitra ny hanao izany any ivelany ianao. Ho fanampin'izany, manana trano fanatobiana entana marobe any Eropa izy, koa, raha manana izany ao amin'ny tahiry, dia afaka manana ny findainao vaovao any an-trano haingana kokoa noho ny nandrasana.
Vidio mivantana ireo finday sinoa tsara indrindra amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra azy
Ity dia iray amin'ireo safidy azo antoka indrindra ananantsika nefa, io koa dia iray amin'ireo sarotra indrindra hatrizay mbola vitsy ny mpanamboatra sinoa mivarotra ny terminal any ivelany any ivelany, ary ireo izay manao izany, dia misy amin'ny firenena tena voafetra. Na eo aza izany dia safidy tsara izy io, indrindra ny fidirana amin'ny fampiroboroboana mety na raha mila fanohanana ara-teknika ianao.
Amin'izao fotoana izao, ny sasany amin'ireo mpanamboatra sinoa izay efa manana ity serivisy ity dia ireto manaraka ireto:
Huawei. Ny mpanamboatra lehibe indrindra ao Shina dia manana magazay an-tserasera eropeana izay ahafahantsika mividy ny ankamaroan'ny vokatra vokariny. Ho fanampin'izany, ianao dia ho afaka hifandray amin'ny serivisy aorian'ny fivarotana ary hiverina mihitsy aza ao anatin'ny fe-potoana voafaritra.
ihany koa Meizu manao fandefasana saika amin'ny olona rehetra, na dia tsy ny tsara indrindra foana aza ny tahiriny.
Iray amin'ireo mpanamboatra sinoa lehibe indrindra, Oppo, manana a online store avy amin'izany no andefasana entana any amin'ny firenena isan-karazany, anisan'izany i Arzantina, Colombia, Peru, Bolivia ary koa Espana.
Azonao atao koa ny mividy ny ankamaroan'ny terminal ZTE ao amin'ny online store tany Espana.
Ho fanajana ny Xiaomi, iray amin'ireo mpanamboatra sinoa malaza indrindra sy iraisam-pirenena, amin'izao fotoana izao fotsiny manao fandefasana mankany Frantsa, Alemana, Fanjakana Mitambatra ary Etazonia. Ny tena anton'io famerana io dia ny olana momba ny patanty izay mety sendra anao any amin'ny faritra hafa.
Ulefone, orinasa sinoa misongadina amin'ny telefaona finday miaraka amin'ny fahombiazany sy ny vidiny izay mahagaga fa ambany ihany koa pejy amin'ny espaniola (sy Anglisy) izay anompoany firenena samihafa, ao anatin'izany i Espana.
Fantatrao izao ny tombony lehibe sy ny fatiantoka lehibe amin'ny resaka fividianana finday sinoa tsara indrindra avy amin'ny magazay an-tserasera Sinoa na any Espana, anao irery ny fanapahan-kevitra: Tianao ve ny antoka sy ny hafainganan'ny fandefasana anao sa tianao ny vidiny manararaotra kokoa ary azonao atao ve ny mitondra faharetana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Aiza no hividianana finday sinoa
Javier Mesa dia hoy izy:
Salama, nividy mivantana ny Blackview BV 8000 (RAM 6Gb, finday lehibe) tany Espana aho http://www.movileschinosespana.com, safidy tsara ho an'ny lisitrao ihany koa, satria Blackview sy Xiaomi Agents izy ireo. fiarahabana
Valiny tamin'i Javier Mesa
Maria Victoria dia hoy izy:
Ny zavatra niainako tao amin'ny Powerplanetonline, volana lasa izay dia nividy xiaomo Mi A1 aho, ary naka mihoatra ny kaonty ry zareo, tsy maintsy nanavao ny mpandefa iraka rehetra aho satria tsy nipoitra ny fandefasako, ary ny powerplanet dia tsy nanome nomerao fanarahan-dia ahy, taraiky ny fahatongavany fa tonga, andro 5/10 / 2018, mangataka takelaka iray aho, andro faha-8 milaza ny fandefasana azy ireo, ny andro faha-9 amin'ny fanaraha-maso dia hita miaraka amina tranga iray, andro 10 omena boaty foana aho, hoy ny orinasam-pitaterana dia omeny ahy inona no alefan'ny powerplanet, raha boaty foana ... Eny, boaty tsy misy… .. Mitaky aho ary tsy tompon'andraikitra na tipsa na powerplanet very 200 € aho noho ny powerplanet …… Amin'ny fomba tsy amaliany ny telefaona , misy fa misy ny fandraisam-peo maharitra, ny mailaka, rehefa tian'izy ireo dia valiany ianao, rehefa tsy tiany…. Tsia. Raha tsara vintana ianao ary tonga aminao, tsara raha misy tsy mandeha… .. Tadiavo ny ainao, tsy hividy amin'izy ireo intsony aho, ary raha mizara amin'ny fivarotana hafa ianao… Izaho koa tsy hividy, mpangalatra.
Valiny tamin'i Maria Victoria
Makà Cube iWork12 latsaky ny 180 euro ary makà fitendry maimaim-poana!
Ny Moto E4 Plus dia mivarotra singa 100.000 XNUMX amin'ny andro voalohany hisehoany any India